Sales Driver (Distribution) | Elan Logistics Co., Ltd. ﻿
Sales Driver (Distribution)
3.10.2019, Full time , Logistics / Transport
Company: Elan Logistics Co., Ltd.
•	သာကတေမွို့နယျနှငျ့အနီးနထေိုငျသူမြား ဦးစားပေးခနျ့ထားမညျ။
•	အနညျးဆုံးအခွခေံပညာ အထကျတနျးအဆငျ့ရှိသူဖွဈရမညျ။
•	10’ * 12’ Truck ကားအမြိုးအစားကိုကြှမျးကငျြစှာမောငျးနိုငျသူဖွဈရမညျ။
•	စညျဘီယာ/ အအေး/ စားသောကျကုနျ/ လူသုံးကုနျဖွနျ့ဖွူးရေးအတှအေ့ကွုံရှိပွီးသူဖွဈရမညျ။
Work location Bo Sonpat Street,Pabedan,Yangon.
•	ကနျြးမာရေးကောငျးမှနျသူ၊ လူမှုဆကျဆံရေးကောငျးမှနျသူ၊ သှကျလကျခကျြခြာပွီး အလုပျကွိုးစားသူဖွဈရမညျ။ •	အငျးစိနျ၊ ခဝဲခွံ၊ သမိုငျး၊ မရမျးကုနျးမွို့နယျ တို့နှငျ့အနီးတ်ငငျနထေိုငျသူကို ဦးစားပေးခနျ့ထာ ...
•	ကနျြးမာရေးကောငျးမှနျသူ၊ လူမှုဆကျဆံရေးကောငျးမှနျသူ၊ သှကျလကျခကျြခြာပွီး အလုပျကွိုးစားသူဖွဈရမညျ။ •	သာကတေမွို့နယျနှငျ့အနီးနထေိုငျသူမြား ဦးစားပေးခနျ့ထားမညျ။
•	Mandalay မွို့တှငျနထေိုငျနိုငျသူဖွဈရမညျ။
161 Days, Full time , Logistics / Transport
•	Auto/Manual နှစ်မျိုးစလုံး ကျွမ်းကျင်စွာမောင်းနိုင်သူဖြစ်ရမည်။ •	ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်သက်တမ်းအနည်းဆုံး(၁)နှစ်ရှိပြီး ရန်ကုန်မြို့တွင်း ကျွမ်းကျင်စွာ မောင်းနိုင်သူဖြစ်ရမည်။ •	ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်သူ၊ လ� ...
•	ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်သူ၊ လူမှုဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်သူ၊သွက်လက်ချက်ချာပြီးအလုပ်ကြိုးစားသူဖြစ်ရမည်။ •	ရန်ကုန်မြို့တွင်းပေါင်မုန့်မျိုးစုံ ၊ ကော်ဖီတို့အားအလွယ်တကူစားသုံးရန် အဆင်သင့်အရောင်းကားဖြင� ...
•	၁၀ပေ x ၁၂ပေ Truck ကား အမျိုးအစားကိုကျွမ်းကျင်စွာမောင်းနိုင်သူဖြစ်ရမည်။ •	စည်ဘီယာ/အအေး/စားသောက်ကုန်/လူသုံးကုန်ဖြန့်ဖြူးရေးအတွေ့အ ကြုံရှိပြီးသူဖြစ်ရမည်။
•	ကွန်ပြူတာ (Excel,Word,Internet,Email) ကျွမ်းကျင်စွာ အသုံးပြုနိုင်သူဖြစ်ရမည်။ •	စားသောက်ကုန်ဖြန့်ဖြူးရေးလုပ်ငန်းတွင် Sales Admin အလုပ်အတွေ့အကြုံရှိသူကိုဦးစားပေးခန့်ထားပါမည်။
604 Days, Full time , Logistics / Transport
Sales Driver – Distribution
•	လူမှုဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်သူဖြစ်ရမည်။ •	သွက်လက်ချက်ချာပြီးအလုပ်ကြိုးစားသူဖြစ်ရမည်။
Sales Driver (Distribution) Sales & Marketing Jobs Joblesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss JobsInYangon Elan Logistics Co., Ltd. Sales & Marketing Jobs Sales & Marketing Jobs Logistics/Transport Jobs in Myanmar, jobs in Yangon